Sein Lyan - စိ န် လျှံ: နှောင်ဖွဲ့မိုးတို့ ရင်ခတ်ချိန်
Writer Sein Lyan Time 11:25 am
17 September 2009 at 11:33
17 September 2009 at 12:18
ပတ်ဝန်းကျင်မှ ထိတွေ့မိသမျှသည် လွမ်းဆွေးကြေကွဲစရာ ကောင်းနေသော်လည်း ထိုလွမ်းဆွေးမှုများသည် အဖော်တစ်ခုအဖြစ် အနားမှာ ရှိနေပြန်၏။..
17 September 2009 at 12:19
17 September 2009 at 12:21
5 kyaw lar sar twar par tal
ပြီးပြည်စုံခြင်းမဟုတ်တော့ တခုခု လိုတော့မပေါ့ ဖိုးစိန်ရဲ့...း)
မိုးတွေညို့တိုင်း မျက်ရည်စို့မိနေတဲ့ ဖိုးစိန်တယောက် မိုးစက်တွေလိုပဲ အေးချမ်းပါစေ...
17 September 2009 at 12:42
ချစ်ခင်နှစ်သက်လေသော တောင့်တမက်မော လေသော ရာတွေဟာ ခါးသက်ပေမယ့်ချိုမြနေ ပါတယ် လွမ်းဆွေးရပေမယ့် အဲဒီလွမ်းဆွေးမှု လေးမှာ ကြည်နူးနေရပါတယ် ... ကောင်းတယ် အစ်ကို ခံစားမှုကိုဖွဲ့ ထားတာ စေ့စေ့တွေး ရေးရေးမြင်ဆိုပေမယ့် အစ်ကိုရေးချလိုက်တော့ အတော်ကလေး ခံစားမိသွားတယ်
အချစ်ကို အငိုနဲ့ အဆုံးသတ်ခွင့်ရချင်သော်လည်း အမုန်းများနဲ့ မဲ့ပြုံးပြုံးပြီး မပြီးဆုံးချင်ပါ။........
အချစ်ကို ဘာလို့ အငိုနဲ့အဆုံးသတ် ရမှာလဲ ..
ဖိုးးစိန် တယောက် ငိုလဲ မငိုပါစေနဲ့.. မဲ့ပြုံးလေးလဲ မပြုံးပါစေနဲ့ ...လို့ ဆုတောင်းပေးတယ် ..
မိုးအေးအေး လေးမှာ ဇိမ်နဲ့ကွေး နေရရင် ဘယ်လောက်ကောင်းလိမ့်မလဲ ။။
မိုးသက်မုန်တိုင်းတွေတော့ မထန်စေချင်ပါဘူး ။
ဟင်းးးး မောင်ငယ်ဖိုးစိန် ဘာဖြစ်.
တို့က အိခိုင်မှ အိခိုင်ပဲနော်.. ဒါပဲ.း)
17 September 2009 at 14:17
ဒါပမယ့် အချစ်ကို အငိုနဲ့ အဆုံးသတ်ခွင့်ရချင်သော်လည်း အမုန်းများနဲ့ မဲ့ပြုံးပြုံးပြီး မပြီးဆုံးချင်ပါ။
အဆိပ်မိနေလို့ပါ ..သည်းခံပါ ..
အချစ်ကို အငိုနဲ့ အဆုံးသတ်ခွင့်ရချင်သော်လည်း အမုန်းများနဲ့ မဲ့ပြုံးပြုံးပြီး မပြီးဆုံးချင်ပါ။ လန်းတယ်ဗျာ..
17 September 2009 at 14:50
အချစ်အကြောင်းကို ခံစားပြီးဖတ်ပေမဲ့ ခံစားချက် ခြားနားနေရင် သို့မဟုတ် မတူညီခဲ့ရင် တစ်မျိုးကြီးဗျနော် ဖိုးစိန် လူတိုင်းကတော့ အချစ်ကို ဖွင့်ဆိုကြတယ် အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါပေါ်မူတည်ပြီးမှသာ အချစ်ကို ခံစားတာ ကောင်းတယ်ဗျ ကဲပါလေ ဆရာဖိုးစိန် အချစ်ကို ၀ါးလုံးကွဲရီပြီး အဆုံးမသတ်ရရင် တော်တော်ကံကောင်းနေပါပြီ ကျန်တာကတော့ သတ်ချင်ရာနဲ့သတ်တော့
တကယ်ချစ်ရင် အငိုနဲ့ အဆုံးမသတ်ပါစေနဲ့ဗျ
ကြိုးစားထား ပျော်ရွှင်မူတွေနဲ့ အဆုံးသတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကလေးသာ လိုအပ်တာပါး)
အဆင်မပြေရင် ပေါ်ပေါ် ဆီလာခဲ့း)
အချစ်ကို ပျော်ရွှင်မှူနဲ့ အဆုံးသတ်နိုင်ပါစေဗျာ
အချစ်မိုး ဘယ်တော့ ရွာမှာလဲ။
အချစ်မိုးးးးး... ဘယ်တော့ ရွာမှာလဲ....
ကြာဖူးတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို စာလေးနဲ့ အတူတွဲမြင်လိုက်မိတာ
မိုးကုတ်မှာ မိုးရေ ကြီးသွားပါတယ်ခင်ဗျား။ (စကားချပ်)
စိတ်ကြောင့် ခံစား၍ ငိုနေရသော အချိန်များသည် ပူလောင်သလောက် အေးချမ်းမှုတစ်ခုကို ထွက်ပေါက်တစ်ခုအဖြစ် ရ၏။
(အချစ်အလွမ်းတို့ဖြင့် နှောင်ဖွဲ့သော မိုးတိမ်မျာသည် တစ်ခါတရံ မိုးကြိုးမုန်တိုင်းများကို သယ်ဆောင်လာတတ်သော်လည်း ကျွန်တော် မမှုပါ။ ထိုအခါ ထွက်ပေါက်ဆိုသည်က ကျွန်တော့အတွက် လိုအပ်လာမည် မဟုတ်ချေ။)
ပတ်ဝန်းကျင်မှ ထိတွေ့မိသမျှသည် လွမ်းဆွေးကြေကွဲစရာ ကောင်းနေသော်လည်း ထိုလွမ်းဆွေးမှုများသည် အဖော်တစ်ခုအဖြစ် အနားမှာ ရှိနေပြန်၏။
(ကျွန်တော်ကတော့ အလွမ်းတွေနှင့်ယဉ်ပါးကာ နေသားတကျ ရှိလို့ နေခဲ့ပြီ။)
နှောင်ဖွဲ့ခြင်းခံထားရသော မိုးတိမ်မှ မိုးရွာစ ပြုနေပြီး…….။နှောင်ဖွဲ့ထားခြင်း ခံရသော နှလုံးသားတွင်လည်း မျက်ရည်မိုးရွာနေခဲ့သည်။ ချစ်တယ်ဆိုသော တီးတိုးစကားသည် ရွာချလာသော မိုးရေစက် ပမာဏနှင့် ညီမျှ၏။ ပူလောင်ခြင်းမပါ နွေးထွေးသက်ဝင်နေဆဲ အရာအားလုံးသည် အေးချမ်းနေ၏။
(ချစ်ခြင်းသည် နှောင်ဖွဲ့တတ်၏။ အချစ်မိုးတို့ စွေရွာသောအခါ အေးမြစေတတ်သလို လေပွေကြမ်းတိုး သရမ်းလေသောအခါ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းအောင် ခြောက်ခြားတုန်လှုပ်စေတတ်၏။ ကို့သော် ကျွန်တော့်နှလုံးသားသည် မျက်ကန်းတစေ မကြောက်သလို စွတ်စိုထုံထိုင်းနေသောကြောင့် ထိုလေပွေကြမ်းတို့ကို ကန်းနေပေလိမ့်မည်)
(ကျွန်တော်ကတော့ အချစ်ကို အချစ်နှင့်စပြီး အချစ်နှင့်သာ ဆုံးချင်ပါသည်။ သို့သော် အချစ်သည် ပန်းချီကားတစ်ချပ်သာ ဖြစ်ပါက ကျွန်တော် ဘယ်သောအခါမျှ ရေးဆွဲလို့ ပြီးနိုင်မည် မဟုတ်သော ပန်းချီကားတစ်ချပ်သာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်)
(ထိုအခါ အချစ်က အချစ်ကို ချစ်ကြောင်းသက်သေများ၊ ထွက်ဆိုချက်များ အားလုံးသည် ရူးသွပ်မိုက်မဲမှုများသာ ဖြစ်ပြီး အချစ်ကို အချစ်က တယုတယ စောင့်ရှောက်ခြင်းသည် အနုပညာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော် သဘောပေါက်သွားလေတော့သည်)
လွတ်လပ်စွာ ဖျက်ထားပါသည် အဲလေ လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲထားပါသည်။
မကျေနပ်က စိန်မျောက်မျောက်.. မျောက်ငို ငိုစေသော်ဝ်
ဟေ ဟေ ဟေ့ ဟေ
17 September 2009 at 18:56
အင်းနော် တစ်ခုခုတော့ တစ်ခုခုပဲ ။ ကိုထောင် အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေ
17 September 2009 at 19:48
ခုလို Romantic ဆန်တာလည်း ဖြစ်တာပဲ ကိုကိုစိန်တို့က
ကိုဂျီးက ခံစားချက်တွေရှိနေလို့လားဟင် ..
စာလေးရော ပုံလေးရော အရမ်းလှတယ်၊ တကယ်ပါ၊ တော်တယ်၊
18 September 2009 at 01:41
သံယောဇဉ်၊ အချစ်နဲ့ မကင်းသူတိုင်း အလွမ်း ဆိုတာကို ချန်ထားပစ်လို့မရပါဘူး.. လေ
18 September 2009 at 01:59
Mechanical, Planning and Supply Chain said...
18 September 2009 at 05:14
ဒီလိုပဲပေ့ါ မောင်လေးရယ်။ အေးချမ်းတဲ့ မိုးတွေနဲ့ ရှင်သန်နိုင်ပါစေ
18 September 2009 at 06:34
ဖတ်ရတာ ကဗျာလေး တပုဒ်လိုပဲ
18 September 2009 at 06:45
အချစ်ကို အပြုံးနဲ့ ပဲအဆုံးသတ်ပါ ဖိုးစိန်ရေ။
18 September 2009 at 08:29
နေကောင်း ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာပါစေနော်း))
လွမ်းတာလည်း လွမ်းပေါ့ :D
18 September 2009 at 18:46
“အပြစ်ရှိသည် မထင် သော်လည်း မှားလျှင်ခံနိုင်၏။ သို့သော် တခြားသူများမှလွဲ၍ ထိုသူ၏ ဥပေက္ခာပြုထားသွားခြင်း တစိုးတစိမျှ အလိုမရှိပြီး..။”
ိငိုနဲ့ တိတ် တိတ် ဒီမှာလည်း မိုးတွေရွာလွန်းလို့ စိတ်ညစ်နေတာ။ ငိုနဲ့တော့ တိတ်တော့။
19 September 2009 at 00:05
မတွေ့ဖြစ်တာ ကြာတော့ ခံစားချက်တွေတောင် အရောင်တွေ လက်နေပါပေါ့လား .. :)
ပတ်ဝန်းကျင်မှ ထိတွေ့မိသမျှသည် လွမ်းဆွေးကြေကွဲစရာ ကောင်းနေသော်လည်း ထိုလွမ်းဆွေးမှုများသည် အဖော်တစ်ခုအဖြစ် အနားမှာ ရှိနေပြန်၏.....
လွမ်းတာလား? တကယ် ဟတ်ထ်ထိတာလားကွယ် .. ဒီလိုပါပဲ.. ဖြစ်ပြီးရင်ပျက်တာပဲလေ.. မဲ့ပြုံးနဲ့တော့လမ်းမခွဲပါနဲ့...
အချစ်ကို အငိုနဲ့ပဲ ဆုံးဆုံး အပြုံးနဲ့ပဲ အဆုံးသတ်သတ်ပါ တနေ့တော့ ကျနော်တို့တတွေ မခွဲချင်ပေမဲ့ ခွဲသွားကြရဦးမှာပါ။
21 September 2009 at 05:01
မအားလို့ ဖိုးစိန်ဆီ ခုမှရောက်တယ်
21 September 2009 at 06:39
တိမ်စိုင်တိမ်ခဲတွေကို မိုးမရွာအောင် လေနဲ့မှုတ်ထုတ်ပစ်လိုက်
23 September 2009 at 10:01